Sweden iyo Finland oo heshiis ka gaadhay arrimaha gaashaandhiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sweden iyo Finland oo heshiis ka gaadhay arrimaha gaashaandhiga
Sweden iyo Finland oo heshiis gaadhay
La daabacay onsdag 18 februari 2015 kl 15.09
Waddamada Sweden iyo Finland ayaa ku heshiiyay in ay iska kaashadaan arrimaha gaashaandhiga. Sidaasi waxa lagu sheegay warbixin ay si wadajir ah u soo saareen wasaaradaha gaashaandhiga labada dal.
Waxa ay labada waddan ku heshiiyeen sidii ay u yeelan lahaayeen iskaashi buuxa oo dhanka gaashaandhiga ah. Kaasi oo loo bixiyay (Swedish Finnish Naval Task Force), waxaana la rajaynayaa in uu iskaashigani si buuxda u dhaqan gali doono sannadka 2023, iyada oo labada waddanba si buuxda isku dhaafsanayaan wixii xogo ah.
Dhanka kale labada dal waxa ay ku heshiiyeen in ay yeeshaan iskaashi dhanka ciidamada ah, kaasi oo suurogalin doona in labada dal ka wada shaqeeyaan arrimaha ammaanka.
Heshiiskan labada waddan dhexmaray ayaa sidoo kale dhigaya sidii ay labada waddan isaga kaashan lahaayeen hawlaha la xidhiidha hubka diyaaradaha. Kaasi oo micnihiisu yahay in ay labada waddan gacan iska siin doonaan hawlgalada ay sida wadajirka ah uga fulinayaan garoonada diyaaradaha labada dal iyo waliba in ay wixii hawlfududayn iyo xogba ah wadaagaan. Wasiirka gaashaandhiga dalka Sweden Peter Hultqvist oo heshiiskan ka hadlayaa waxa uu yidhi:
- Waxa aannu hadda sii xoojinaynaa xidhiidhka aannu Finland la leenahay. Finland waxa aannu wadashaqayn fiican kala leenahay arrimaha la xidhiidha isbahaysiga Nato iyo saaxiibbadeeda. Waxa kale oo aannu Finland ka wada shaqaynaa iskaashiga dhanka difaaca ee waddamada Noordiga (Nordic Defence Cooperation). Sidaasi daraadeed hadda waxaanu dhisaynaa xidhiidh fiican oo dhanka ammaanka ah, kaasi oo isbahaysiga militarigu uu sees u yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Wasiirka gaashaandhiga dalka Sweden Peter Hultqvist.
Kaasi waxa uu ahaa Peter Hultqvist oo ah wasiirka gaashaandhiga dalka Sweden oo ka warramayay heshiiskii labada dal ee Sweden iyo Finland dhexmaray. Dhanka kale wasiirka gaashaandhiga dalka Finland Carl Haglund oo isna arrintan ka hadlayaa waxa uu yidhi:
- Run ahaantii waa iskaashi qotodheer oo na dhexmaray Iswiidhan. Sidoo kalena waa heshiis mihiim ah oo wax ka taraya wadashaqaynta aanu la leenahay midowga Yurub iyo saaxiibtinimda isbahaysiga Nato. Waa heshiis waxtar u leh labada dalba. Iskaashigani maaha mid cid kale khuseeya, waa se mid faa'iido weyn noo leh.